Fadeexad dul hoganeysa Wasiirka macdanta iyo Xildhibaan Siciid Rooble + odayaasha deegaanka Saaxil oo kacsan | Berberatoday.com
Fadeexad dul hoganeysa Wasiirka macdanta iyo Xildhibaan Siciid Rooble + odayaasha deegaanka Saaxil oo kacsan
February 12, 2018 - Written by berberatoday berberatoday
“..Waxanu leenahay Wasiirka Berbera Ciise Muuse ayaa Ilahay ku Beeray. Deegaanka Wax laga baadhayanaa Maxamed Ciise ayaa dega. Wallaahi inaanan kaa aqbalayn Habar-jeclo Gudoomiye ku xigeen u noqda.. budhcad qaabileyste ah weeye Wasiirkan Macdanta la keenay iyo kan dhaameelkii Baarlamaanku waalay Siciid Cilmi Rooble”. Oday kamid ah Waxgaradka G. Saaxil
Waxa kaloo uu intaa raaciyey Waxgaradkaasi oo u Wasiirka iyo Xildhiibaanka ku eedeyey inay yihiin budh-cad Macdan doon ah oo aanay Wadin shidaal baadhis, waxanu arrinkaa u daliishaday oo u yidhi “..meeshan Buurta ayaa Macdanta laga guranayaa waa indho Sarcaad oo waxay doonayaan Wasiirkan iyo Ninka Cadka xaaraanta ah uu ku laalushay (Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble) inay Macdanta intay gurtaan hadhowna shirkaddu way tagtay la yidhaa. Arrinkaa annaggu aqbali mayno, hadii shidaal baadhis la samaynaayo anagga deegaankii ah oo ka shaqeynaynaa. Ma dhici karto Maanta in Wasiirku shaqaalaha Burco intuu kasoo qorto Beeshiisa, anaggana na yidhahdo gudoomiye ku xigeen qaata. Waxanu leenahay Wasiirka Berbera Ciise Muuse ayaa Ilahay ku Beeray. Deegaanka Wax laga baadhayanaa Maxamed Ciise ayaa leh. Wallaahi inaanan kaa aqbalayn Habar-jeclo Gudoomiye ku xigeen u noqdaa.. budhcad qaabileyste ah weeye Wasiirka iyo kan dhaameelkii Baarlamaanku waalay Siciid Cilmi Rooble”.
Si kastaba ha ahaatee, hadii aan qorshaha Wasiirka iyo kan deegaanka degdeg loo soo kala dhex-gelin waxa uu mashruucani ku dambayn doonaa mid faashilma wajiga horabaa, sidii kuwii hore ee aan soo arki jirnay. Waxana la gudboon Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi inuu arrinkan ka cadaalad sammeeyo, isla markaana tallaabo ku haboon ka qaado Wasiirkan oo u banbaxay inuu mashaaricda horumarineed u bedelay mid uu beeshiisa ku naas-nuujiyo. La soco Warbixino ku taxaluqa saamiga beelaha Gobolka Saaxil kala leeyihiin hadii ay shaqo abuur noqoto iyo hadii ay saami-mashaariiceed noqotaba.